Hartiga Somali galbeed | allsanaag
Hartiga Somali galbeed
Beesha Biciidyahan ee Majeerteen iyo Isaaq yaa ku badan ama ku degaan weyn Somali galbeed?
Hadalkii uu dhowaan Madaxweynaha la soo xulay Mustafe Cagjar, uu ka hor sheegay golaha baarlamaanka Soomaalida Itoobiya ee ahaa waa ” inaan ku dayanaa dimoqraadiyadda Somaliland”, wuxuu khatar ku yahay Hartiga dega Somali galbeed
Marla hore Somaliland Dimoqraadiyadi kama jirto ee waa hoyga lagu kobciyo argixisada Soomaaliya.
Marka labaad, maalintaa uu hadalkan Mustafe Cagjar ka hor jeedinayey Baarlamaanka degaanka , waxa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool lagu aasayey dhalinyaro isgu jiray gabdho iyo wiilal oo ka soo jeeda Beesha Dhulbahante oo ay ku dileen maamulka Somaliland, ciidan ka amar qaata
Dhalinyaradan Dhulbahante ee maamulka Mustafe Cagjar ku sheegay inay demoqraadiyad yihiin ku dilayeen degaanadooda, ayaa intooda badan waxy degaan dhulka Howdka ah ee Itoobiya.
Dhulka Howdka oo intiisa badan ku yaala Itoobiya, beelaha degaana ay u badan yihiin beelaha Harti, oo inta taariikhda la ogyahay ku sugnaa degaanadaas ilaa Xilliyaddii Axmed Guray oo ay halkaa u yimaadeen inay degaanadaas difaacaan, kana soo duulay degaanka Maydh ee gobolka Sanaagt.
Waa Ixtiraam daro, aqoon yari, seedinomo uu raali gelinayo reerka uu ka qabo iyo fudayd uu ku kacay Mustafr Cagjar inuu buun buuniyo Beel Soomaali inteeda kale doonaysa inay ka goostaan, kuna khasbaya, dilaya , xasuuqaya beelihii kale ee Soomaaliyeed ee diidanaa inay ku raacaan fikirkaas guracan ee beesha Isaaq wadato
Xaqiiqada degaanka Killilka 5aad, Hartiga ayaa uga badan Isaaqa. Maantase Isaaqu iyaga oo ku dhuumanaya magac Direed ayeey doonayaan inay xaqiraan xaquuqda beelaha Harti ee degaanadaas ha ahaato mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Madaxweynihii hore Cabdi Ileey arinta waa ku fahmay Isaaqa , waana ka hor yimid. Maantase koox dhaantaynaysa uu Mustafe Cagjar hor boodayo ayaa Isaaqu fursad ka heleen waxay doonayaan in Killilka 5aad ka bilaabaan waxay hadda ku hayaan bulshada gobolka Sool.
Ugu danbayntii maalintii maamulka Jubbaland la dhisayeyey ee Isaaqu lahaayeen iyaga oo kicinaya Soomaalida Koonfureed “Jubbooyinka wa lagu soo duulay”, dadkii u kacay waxay ahaayeen maamul goboleedka Puntland oo Hartigu u badan yahay , qoraaladii af Soomaaliga iyo Ingiriiska u badnaa ee wacyi gelinta aha, dradkii qorayey waxay ahaayeen dhalinyaro Harti ah, kuwii mudaharaadayey waxay ahaayeen Harti. Ururkii SAHAL iyaga ayaa garab isataagay. Maanta haddi shalay Absame ka gaabiyey u gurmadaka bulshada gobolka Sool maanta iyaga ayaa laga sugayaa xaquuqda dadkii la socday beelahii difaaca u yimid degaanadaas e la socday beesha ZAMAN BARAH, qabiilka BARZA, qabiilka YIGLEH, qabiilka GAASAAR ,qabiilka CARABTA KHAAN, qabiilka ILQE, qabiilka YABARRE , qabiilka HARTI. Sidoo kale waa inay canbaareeyaan hadalka ka soo yeedhay Cagjar oo ah hogaankii u horeeyey ee Soomaliyeed ee u ololeeya gooni istaaga Somaliland. Nin Xarashin shalay1988 cuqdad u yimid ayaa doonaya inuu qaato xaquuqda nin degaanka difaac ugu yimid qarnigii 14aad isaga oo u soo gooyey 2000km uuna gadiid cir iyo dhul toona soo raacin
Mustafe Cagjar kun soo dhowoow xisbigaaba Sverigedemokraterna (SD) ee neceb isirka Soomaalida
← Wasiirka Batroolka oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway Eng Camey oo Garoowe Ku Soo Laabtay Kana Hadlay Safarkiisii Muqdisho. →